Kuze kube manje, kukhona izifo eziningi ezephula impilo elokuthula kulinganiswa wobulili fair. Omunye Kungashiwo kufanele kubhekwe cystadenoma we esibelethweni. Ukuthi kuyini, akwaziwa kuwo wonke umuntu. Eqinisweni cystadenoma we esibelethweni -, ngaphezu kwakho konke, ukuvuvukala yangempela emzimbeni kwesimiso sokuzala wobulili bubuhle. Ezimweni eziningi, isimila enjalo ebonakala ifomu kunalokho enkulu ehlanganisa amaphilisi futhi ulwelwesi EPITHELIAL. Uma lesi sifo uma kuqhathaniswa ne abavamile simila wesibeletho, esimweni sokuqala, isimila kungaphezu akhule kusukela ingozi ukuze ebulalayo.
Cystadenoma we esibelethweni ihlukaniswe izinhlobo ezimbili: serous futhi mucinous. cystadenoma Serous we esibelethweni Ukwakheka nakho kungaba mono noma emaceleni, isibonelo. Nokho, ezivame kakhulu okuthiwa bushelelezi-cystoma njengoba ngokuthi isifo esifanayo phakathi ochwepheshe. Ngokuphathelene nenani cystadenoma kuleli cala, kuyaqabukela engaphezu kuka amathathu amasentimitha ububanzi. Nokho, uzovuma, lena okubhidliza esibelethweni. Cystadenoma we esibelethweni siqukethe ogxile ka serous uhlobo uketshezi. Capsule isimila ezimweni eziningi has a isakhiwo aminyene futhi fibrous.
Olunye uhlobo cystadenoma wesibeletho kuyinto cystoma grubosochkovaya. Igama layo liyazikhulumela. Iqiniso lokuthi isimila enjalo ngokuvamile kakhulu kusukela ezihlukahlukene zokwakheka, noma njengoba bebizwa ososayensi zingcwecwe. Konke lokhu zingcwecwe, esikhundleni salokho, bayakwazi hyalinosis noma ukuvuvukala ezinzima kakhulu. Lezi papillae embozwe ungqimba EPITHELIAL, okuvela kulo ngokwalo uphahlwe cystoma uhlobo olufanayo.
Uhlobo lwesithathu libizwa cystadenoma Papillary. It kuyehluka kuneminye izimila wesibeletho wukuthi lolu hlobo is a multi-ekamelweni cystoma kumiswa. Neziqu papillary uthayiphe omningi. Bona igcwale ngamunye cystadenoma iseli cishe ngokuphelele. Ochwepheshe bathi ukuthi onjalo isimila kohlobo ngokuvamile sifana ukholifulawa abavamile. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi kukhona zokwakheka ezifana ukuthi ibukeke warty umzimba. Kuye zomzimba we cystadenoma umzimba papillary we esibelethweni ungaba ukuminyana elikhulu noma elincane. Kulokhu, lo isici kuthinta kumiswa limescale. Kepha ingakanani le cystoma uhlobo, ke lincane kakhulu uhlobo lokuqala noma lesibili. Ngaphakathi cystadenoma uhlobo papillary kuyinto brown liquid noma ugodo ephuzi. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukwakheka papillary akhiwe hhayi kuphela ngaphakathi cystadenoma, kodwa ngaphandle, phezu kwe-isimila. Ngamunye papilla ku cystadenoma ayegcwele imithambo yegazi kanye amaseli eziningi. Ngaphezu okungenhla, kuyadingeka ukuze ucacise ukuthi epithelium zalezi zakhiwo noma okuthiwa papillae efana ngokwezinga elikhulu ne epithelium ijabulise.
Uma umuntu etholakele cystadenoma we esibelethweni, ngeke zidinga ukwelashwa saziso. Kuyaphawuleka ukuthi izimpawu zalesi sifo abhekwa ubuhlungu, imfiva nokunye. Ukwambula cystadenoma esibelethweni usebenzisa ultrasound. Ukwelashwa liyadingeka kokungenela kuhlinzwa yokutakula obengeziwe umzimba esebenzisa izidakamizwa ezikhethekile. Ukuhlinzwa ku ezikhiqiza amaqanda kuze kube manje akuyona yingozi. Nokho, konke kuncike esigabeni ukuthuthukiswa cystadenoma futhi ubukhulu bawo.
Kungani kunezinkolo Kwabiwa nyangazonke ngemva?
Ehlasela umzimba webele mammary nezindlala: Izimbangela, Izimpawu kanye Ukwelashwa
Izimpawu Alcoholism e abesifazane: ngezimpawu esiteji. Ingabe ukusebenzisa uphuzo ngokweqile zesifazane iphathwa?
Indlela ukukhetha izicathulo ephelele: Amathiphu Girls
Ukuvakashela Turkey nengane encane
Marigolds: ukutshalwa kanye nokugcinwa